Cracker(မြန်မာလိုစာအုပ်) - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
CRACKER လမ်းညွှန် ပါ။crackနည်းပညာကိုလေ့လာသူများအတွက်အဆင်ပြေတဲ့စာအုပ်လေးပါ
အောက်ပါအသင်းဝင် 31 ဦးတို့မှ thureinsoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုကိုသီဟ, ကိုစံငြိမ်း, ဆိုင်ကျောက်, နီထွန်းဦး, လင်းလက်တာရာ, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, နေမင်းမောင်, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်မိုးထွန်း, အောင်ကျော်မျိုး, Aaron, arkaraung, bachitdin, creative2020202020, daya, ko myo, KznT, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthumon, moe gyi, moe_poung, phoetharlay, phoopyaitsone, phyomyintthein, sAnDViper, thighwanna, thurein, wunna313, yelinoo, zo
18-01-2011, 08:04 PM
ပြန်စာ - Cracker(မြန်မာလိုစာအုပ်)
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်ဒေါင်းသမျှ ifile ကလေ
download ticket မှာ ဂဏန်းတွေ ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ Download Box ပေါ်လာလို့ Download ကို ကလစ်ပေးရင်တောင်
ဘာဖိုင်မှာ download မရဘူး ifile က ဘာဖိုင်ဒေါင်းဒေါင်းဖြစ်နေတာပါ အဲတာနဲ့ sing up လုပ်ပြီး အကောင့်ဝင်လိုက်တာလည်း
အရင်အတိုင်းပဲ ဘာမှ ဒေါင်းမရလို့ ။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ။
အစ်ကိုအဆင်ပြေရင် ဒီပြင့်ဆိုက်တစ်ခုခုမှာ ပြန်တင်ပေးပါလားဟင်။ ကျေးဇူးပါ။ ဒီစာအုပ်လေးကို စိတ်ဝင်စားလို့။
interupload မှာဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေလည်း အဆင်ပြေကြမယ်ထင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ လီယိုနာဒို အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နေမင်းမောင်, mgwinhlaing, minthumon, thureinsoe, zo
ကဲ လီယိုနာဒိုလေးရေ cookie တွေကိုရှင်းမနေနဲ့တော့။ကျနော်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပြီဗျာ။ ကြိုက်တဲ့နေရာကသာ ဒေါင်းပါ။အဆင်ပြေမှာပါနော်။ အဆင်မပြေရင် ထပ်တင်ပေးမယ် လိုအပ်တာသာပြောပါဗျာ။။။။။။။
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ amaung344 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂျွန်ဝမ်း, မိုးတိန်, လီယိုနာဒို, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, နေမင်းမောင်, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, arkaraung, KznT, mgwinhlaing, minthumon, thureinsoe, tu tu, wunna313, yelinoo, zo
22-01-2011, 07:17 PM
ဖွင့်လည်းကြည့်ရော demage တဲ့
သုံးခါတောင် ပြန်ဒေါင်းကြည့်လည်း အဲဒီအတိုင်းပဲအစ်ကိုတို့ရေ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ လီယိုနာဒို အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 141 ခုအတွက် 660 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အင်တာနက်ကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် အကို .. ကျွန်တော် ဒေါင်းပြီးဖတ်ကြည့်တာတော့ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ် .. ကွန်နက်ရှင်းကောင်းကောင်းလေးဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ပြန်ပြီး စမ်းဒေါင်းကြည့်လိုက်ပါ့လား အကို .. ကျွန်တော်ကတော့ အဆင်ပြေတယ်ဗျ .. စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ်ပါ .... ၀ါသနာပါသူတွေအတွက်တော့ တန်းဖိုးရှိလှတဲ့ အရာပါ ..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ sAnDViper အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, mgwinhlaing, minthumon, thureinsoe, zo
23-01-2011, 06:20 AM
အကိုလိုအပ်မယ်ဆိုရင် pm ပို့ပီးတော့ တောင်းနိင်ပါတယ် ညီလေး
တက်နိင်သလောက် အဆင်ပြေအောင် လိုက်လုပ်ပေးပါ့မယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နေမင်းမောင်, arkaraung, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthumon, sAnDViper, thureinsoe, yelinoo, zo
23-01-2011, 05:53 PM
သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, နေမင်းမောင်, မေယမင်း, mgwinhlaing, minthumon, wunna313, yelinoo, zo
25-01-2011, 03:18 PM
mediafire က access deined တဲ့
ကျွန်တော် အားကုန်လက်ကုန် ဒေါင်းကြည့်ချင်လို့
နေမင်းမောင်, arkaraung, mercury, mgwinhlaing, zo
25-01-2011, 03:46 PM
ဒီမှာ မှာ ကို amaung334 ပြန်တင်ပေးထားတယ်လေ။ သွားကြည့်လိုက်ပါဦး . . . ကျွန်တော် ဒေါင်းတာတော့ အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျ။
Last edited by မောင်အောင်ဟိန်&#; 25-01-2011 at 04:00 PM..
ဟိန်းဟိန်းမြတ်, နေမင်းမောင်, jucklucifar, mgwinhlaing, minthumon, thureinsoe, yelinoo, zo
ပို့စ် 22 ခုအတွက် 115 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Cracker ကိုလေ့လာတဲ့ကိုကို မမ များအတွက် ပါ။ cracker 2.0 ပါ . အပေါ်က1.0 ရဲ့ အဆက်ပေါ့။
ဒီမှာဒေါင်းပါ http://ifile.it/m9e5rnv/Cracker%2BGuide%2B2.0_2.pdf အဆင်မပြေရင်ပြောနော်..
အောက်ပါအသင်းဝင် 18 ဦးတို့မှ mr.jittwo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒဿဂီရိ, မင်းမဟူရာ, လမ်းပြကြယ်, သန့်ဇင်ဌေး, ဇေယျာအေး, နေမင်းမောင်, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အောင်လံလေး, မြင့်မိုရ်, aungphyo, bagothar85, mgwinhlaing, minthumon, PyaitSone, sAnDViper, thureinsoe, yelinoo, zo
Find More Posts by mr.jittwo
no such file တဲ့ အစ်ကိုရေ ပြန်တင်ပေးပါအုံး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ziddu ကတင်ပေးပါလားဟင်။
မိုးဦး, သန့်ဇင်ဌေး,ဲပြည့်ဖြိုးအောင်, aungphyo, bagothar85, g00gle, mercury, mgwinhlaing, minthumon, yelinoo, zo
ကျွန်တော်ပြောတာက ကိုamaung344 တင်ပေးတဲ့ဟာက ဒေါင်းလို့ရလိုက်ပါတယ်။ ဖွင့်ကြည့်တော့ version 2.0 တဲ့
အခု ပြောတာက ကိုစိုးပြည့်တင်ပေးတာဟာကလည်း 2.0 လို့ပြောထားပြီး အပေါ်က 1.0 တဲ့
အဲဒီ 1.0 ကိုလိုချင်တာပါအစ်ကိုရေ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ လီယိုနာဒို အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
mgwinhlaing, minthumon, zo
လီယိုနာဒိုရေ အောက်မှာယူလိုက်ပါ ..ခရက်ကာ ၁.၀ ပါ .. အဆင်မပြေရင်ပြောပါ .. မေးထဲကိုပို့ပေးပါ့မယ်
ဒါက ၁.၀ ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ mr.jittwo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
လီယိုနာဒို, မောင်ပေါ်ဦး, daya, KznT, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthumon, PyaitSone, yelinoo, zo
24-11-2011, 07:44 PM
ma ya woo bya lote par own 1.0 lo chin lo bro.....
mediafire so poe kg bar tal bro
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ Jar Jar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မိုးတိန်, mgwinhlaing, zo
Jar Jar ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Jar Jar
ဒီနေရာ ကနေ နှစ်သက်ရာ ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးကို သွားရောက် ဒေါင်းလုဒ်နိုင်ပါတယ်။ တလက်စထဲ မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်မှာ Burglish ကို အသုံးမပြုပဲ English လိုဖြစ်ဖြစ်၊ မြန်မာလို ဇော်ဂျီဖောင့်ဖြင့်ဖြစ်စေ အသုံးပြုပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ ဖိုရမ်မှာ Burglish နဲ့ ရေးခြင်းကို ခွင့်မပြုလို့ပါခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
Last edited by bagothar85; 24-11-2011 at 08:02 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ bagothar85 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မိုးတိန်, သန့်ဇင်ဌေး, မြန်အောင်သား, arkaraung, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthike, minthumon, tu tu, yelinoo, zo
Originally Posted by thureinsoe
အစ်ကိုေ၇ ဒေါင်းလို့ လည်းမရဘူး။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ မသိဘူး။ အီးမေးနဲ့ ပို့ပေးပါလား ပိုလွယ်မလားလို့ ..... ကျေးဇူးပါနော်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ soewaddy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by soewaddy
ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့လဲ မရဘူး။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ မသိဘူး၊ ကူညီကြအုံးနော် ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ....
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ soewaddy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အကိုတို့ရေ အောက်ကကိုသူရိန်တင်ပေးထားတဲ့ Ziddu လင့်ကကောင်းနေပါတယ်သေးတယ် မဒေါင်းတတ်ဘူးဆိုရင်တော့
Download ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ ပြီးရင် Verification Code ရဲ့ဘောက်မှာ သူဘေးနား စာလုံးလေးတွေအတိုင်းရိုက်ထည့်ပေးပြီးတော့ ဒေါင်းလိုက်ပါအဆင်ပြေပါစေ။
13-04-2012, 03:49 PM
ပို့စ်3ခုအတွက်9ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ hteenan အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
mgwinhlaing, minthumon, phyomyintthein, yelinoo
Find More Posts by hteenan
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 08:50 PM